မဟာဗြိတိန်ဘုရင့် နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
တရားဝင်ဂရိတ်ဗြိတိန်ကိုခေါ်ဂရိတ်ဗြိတိန်၏နိုင်ငံတော်   တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ် အတွက် အနောက်ဥရောပ 1 ဇန်နဝါရီ 1801 1 မှမေလ 1707 ကနေ။ ပြည်နယ်သည် ၁၇၀၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုသမဂ္ဂ၏သဘောတူစာချုပ်ကိုလိုက်နာ ခဲ့သည်။ ( ၁၇၀၇ ) အက်ဥပဒေကိုပြည်ထောင်စု (၁၇၀၇ ) မှအတည်ပြုခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံများ ( ဝေလနယ်များ အပါအ ၀ င်) နှင့် စကော့တလန် တို့ကို ဂရိတ်ဗြိတိန် ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးနှင့်၎င်း၏အစွန်အဖျားကျွန်းများပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မန် ကျွန်း နှင့် ချန်နယ်ကျွန်းများ မှလွဲ၍ ကျန်။ အဆိုပါ ပြည်နယ် ကို Westminster တွင်အခြေစိုက်သည့် ပါလီမန် နှင့်အစိုးရတစ်ခုတည်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ယခင်နိုင်ငံတို့ခဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြည်ထောင်စု ကတည်းက စကော့တလန်ဂျိမ်း VI ကို ဖြစ်လာခဲ့သည် အင်္ဂလန်ဘုရင် နှင့် အိုင်ယာလန်ဘုရင် ၏အသေခံခြင်းတွင်အောက်ပါ 1603 ခုနှစ် အဲလီဇဘတ်ငါ က, "အကြောင်းကိုဆောင် ခဲ့. ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုပြည်ထောင်စု " ။ စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ အိုင်ယာလန် သည်ဥပဒေပြုရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ၁၇၁၄ တွင် ဂျော့ချ် ၁ ကိုဂရိတ်ဗြိတိန်၏ရာဇ ၀ င်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်သည် ဟန်နိုဗာမဲဆန္ဒရှင်များ နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
အလံတော် Royal coat of arms
နိုင်ငံတော် သီချင်း: 'God Save the King'/'Queen'
အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်[မှတ်စု ၁]
Scots, Welsh, Scottish Gaelic, Norn, Cornish[မှတ်စု ၂]
အသစ်စက်စက်ပေါင်းစည်းသောနိုင်ငံတော်၏အစောပိုင်းနှစ်များကို Jacobite မြင့်တက်မှု ဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် ၁၇၄၆ ခုနှစ်တွင် Culloden တိုက်ပွဲ၌ စတူးဝပ်အမှုကြောင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ၁၇၆၃ ခုနှစ်တွင် ခုနစ်နှစ်စစ်ပွဲတွင် အောင်ပွဲသည် ဗြိတိသျှအင်ပါယာ ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရာစုနှစ်တစ်ခုလုံးတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအင်အားကြီးဖြစ်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့ပြီးသမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးအင်ပါယာဖြစ်လာသည်။
၁၇၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်း မှစ၍ အရှေ့အိန္ဒိယကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအားတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ကိုလွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်မြောက်အမေရိကတိုက်ကို၎င်း၏တိုးပွားလာနေသောကိုလိုနီများမှတဆင့်မြောက်အာဖရိကတိုက်ကြီးများကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ။
၁၈၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ယူကေဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်တို့ ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ၁၈၈၁ ခုနှစ်တွင် အက်ဥပဒေ ၁၈၀၀ ကို အက်စ်ယူအက်စ် ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဗြိတိန်နိုင်ငံကဂရိတ်ဗြိတိန်, Britannia သို့မဟုတ်Brittānia, ထိုမှတစ်ဆင့်ဗြိတိန်၏ပြည်မှကျွန်းများအတွက်လက်တင်အမည်ဖြင့်မှဆငျးသ ပွငျသဈဟောငျး Bretaigne (ဘယ်ကိုလည်း ခေတ်သစ်ပြင်သစ် Bretagne) နှင့် အလယျပိုငျးအင်ျဂလိ Bretayne, Breteyne ။ ဂရိတ်ဗြိတိန်ရဲ့ပထမဆုံး 1474. အတွက်တရားဝင်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟူသောဝေါဟာရကို 
↑ French was the official language of the courts until 1731
↑ The number of native speakers of Cornish fell to zero in this period
↑ Denys Hay (1968). Europe: the emergence of an idea. Edinburgh U.P., 138။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟာဗြိတိန်ဘုရင့်_နိုင်ငံ&oldid=558590" မှ ရယူရန်
၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။